Dood: saaxiibtinimada ka dhaxaysa nin iyo naag ma suurtagalbaa? … Su’aashu had iyo jeer waxay kicisaa damac. Maya, qaar baa dhaha, kuwaas oo soojiidashada galmadu aan waligeed laga goyn karin. Haa, qaar kale ayaa ku doodaya, kuwaas oo sii wata xiriir aan kala go ’lahayn. Baadhitaanka xiriirka jilicsan ee ka dhexeeya rabitaanka iyo kala duwanaanta! | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: July 22, 2017 00: 20 No Comments
“Dooddu way furan tahay” â € | Nin iyo naag saaxib ah?
Fikradda waxay ahayd mid aan la aqbali karin muddo dheer, labadii dumar ee ku noolaa caalamka kala duwan, iyaga oo aan si dhab ah u garanayn midba midka kale. Guud ahaan haweenka hawsha ka dibna iskuul isku dhafan ayaa caqabad ku noqday xiriirka fog. Muddadii ay jirtey cakshiinka, inta badan tirada badan ee nolosha ka hor intii hore, waxay ka tagtaa goobta u furan tahay dhalashada saaxiibtinimo adag oo u dhexeeya ragga iyo dumarka, iyo dhammaantoodba.
Saaxiib waa qof naga yaqaanno wadnaha, oo aan u dhiibno iyada oo aan qurxiyo. Desire wuxuu u baahan yahay qarsoodi, oo saaxiibtinimadu ay diyaar u tahay inay tagto: "Si aad uhesho kan kale waa in la ogaado in dhismaha maskaxdu aysan waxba ka qabin miino," ayuu yiri Catherine Blanc, oo ah cilmi-nafsiga, cilmi-nafsiga iyo qoraaga La Sexiité des Femmes, ma aha joornaalada (Jirka, "Evolution ", 2009). Farqigaasi wuxuu abuuraa farqiga u dhexeeya aniga iyo aniga, taas oo aan raadin doono inaan buuxiyo mahadnaqa jinsiga. Saaxiibka, arrimuhu waa amar kale: waxaan isku dayeynaa inaan dib u soo celino jilicsanaanta, xiriirka aan la leenahay dad, hooyo, walaalaheena iyo gabdhaheena. Waxaan ka tagnaa barta jinsiga ah ee aan khatar gelinaynin si loogu yeedho xaalad cakiran. "
Saaxiibada midabka leh: Intaa waxaa dheer, saaxiibo badani waxay xoojinayaan dammaanad, qaraabada qoyska oo isku mid ah, iyaga oo isku mid ah, iyaga oo udhexeeya iyaga dhexdooda iyaga oo caqabad ku jira.
Rabitaanku miyaa maqan?
"Waxaan jecel nahay boosaska sirta ah: midkoodna waa rabitaan ama ma jiro. Laakiin noloshu waa wax aan macquul ahayn, oo ka sii daraysa. Inta badan cayaaraha seddexaad ayaa u dhaxeeya nin iyo naag saaxiibo ah, iyada oo aan taas la mid aheyn cawaaqib ku saabsan xiriirkooda "
Bini’aadamka uma kala baxo sidaas oo kale, si cad, waadix ah. Kaararka ayuu u qaybiyaa si kala duwan, laakiin waxay ku dhex jiraan xiriir kasta. Soojiidashada ayaa jirta, laakiin way kujirtaa, si ay uga bixi karto qolka saaxiibtinimada.
Sep30 10: 58
HI / LO: 22/18 ℃
DRC: muhiimad siiso afafkeena qaran; marka lagu daro luqadda rasmiga ah, Faransiiska, Jamhuuriyadda Koongo oo leh 4 af qaran: Lingala, Kikongo, Tshiluba iyo Siswahili
Sebtember 29, 2020 17: 17
Charlemagne Péralte (1866-1919), wuxuu ku dhashay Hinche (Republic of Haiti) 1866 qoys ka mid ah bourgeoisie la iftiimiyay: 1915 Mareykanku wuxuu ka degay Haiti cunsuriyadda, oo aan dhammaanayn ilaa 1934 "
Sebtember 29, 2020 11: 22